कोरोना भाइरस सं’क्रमितको उपचारमा दिनरात खटेका स्वास्थ्यकर्मीको मास्कले बि’गारेको अनुहार ! – Khabarhouse
कोरोना भाइरस सं’क्रमितको उपचारमा दिनरात खटेका स्वास्थ्यकर्मीको मास्कले बि’गारेको अनुहार !
Khabar house | १ फाल्गुन २०७६, बिहीबार ०९:३४ | Comments
काठमाडौं । नोवेल कोरोना भाइरसले चीनसहित विश्वभर त्रासको वातावरण सृजना गरेको छ । चीनको हुबेइ प्रान्तस्थित वुहान सहरबाट संक्रमण फैलिएको कोरोनाभाइरसले हालसम्म चीनमा १,३५० जनाको ज्यान लिइसकेको छ भने करिब ६० हजार सं’क्रमित भएका छन् । चीनमा यसलाई कोभिड–१९ नाम दिइएको छ । यसबाट बच्न विशेष गरी मास्क लगाउनु पर्ने हुन्छ ।
सं’क्रमित तथा सं’क्रमणको आशंका गरिएकाहरुको उपचारमा दिनरात खटेका चिकित्सक सहित स्वास्थ्यकर्मीले चौविसै घण्टा मास्क लगाउँदा अनुहारमा खाउचोट लागेको छ। चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले सार्वजनिक गरेका ति तस्विरमा स्वास्थ्य कर्मीको अनुहारमा चोट लागेको देखिन्छ । उनीहरु थकित र गलित भाव झल्कने अनुहारमा लागेको खाउले झनै चिन्तित देखिएका छन् ।
कोरोना भाइरसको हालसम्म भ्याक्सिन तथा औषधि पत्ता नलागेकाले उपचारमा कठिनाइ आइ रहेको छ। नियन्त्रण गर्न सकस बनेको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले जनाएको छ। डब्लूएचओले कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर स्वास्थ्य सं’कटकालको घोषणा समेत गरेको छ ।